A ga-ewepụta mmelite iji dozie nchapu ihuenyo nke OnePlus 6 | Gam akporosis
N'oge na-adịbeghị anya, anyị gwara gị banyere nsogbu ụfọdụ ndị ọrụ na-enweta na OnePlus 6. Mgbe mmelite OxygenOS, enwere ndị ọrụ nwere nsogbu na nchapụta akpaka. Ihe na-eme ka ihe na-enwu enyo na ihuenyo. Nke a abụghị nsogbu dị oke njọ, mana ọ na-akpasu iwe maka ndị ọrụ nwere ya.
Ọ bụ ezie na Will gaghị echere ogologo oge ruo mgbe ihe ngwọta ruru maka OnePlus 6 gị. N'ihi na onye nrụpụta ahụ n'onwe ya chọrọ ịkọrịta okwu ebe ọ bụ na ha na-arụ ọrụ na nwelite ọhụụ nke ga-akwụsị nsogbu ndị a na ngwaọrụ ahụ, nke ahụ agaghị ewe ogologo oge ịbata.
OnePlus ewepụtala nkwupụta na weebụsaịtị ya, nke ha na-ekwu maka nsogbu a na ihuenyo dị elu. Ha na-ekwu na mmelite ga-abịa n'oge na-adịghị anya site na OTA na OnePlus 6 niile. Ekele ya, nsogbu a kwesiri idozi ya na ekwentị na-arụ ọrụ ọzọ.
Ma N'oge a enyebeghị ụbọchị maka mmelite a. Companylọ ọrụ ahụ emechaala nkọwa nke mmalite ya, ihe niile na-egosi na ọ ga-abata na nchekwa gam akporo maka ọnwa nke August. Yabụ na ọ dị ka ị gaghị echere ogologo oge.
Agbanyeghị na ọ dị mkpa ichere ruo mgbe ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya na-enye ndị ọrụ nwere ozi ndị ọzọ nwere OnePlus 6 nke ọfụma a na ihuenyo ahụ. Akụkụ dị mma bụ ọ bụ nsogbu a na-edozi n'ụzọ dị mfe jiri mmelite OxygenOS ọhụrụ.
Ruo ugbu a abụwo otu n'ime nsogbu ole na ole, ma ọ bụrụ na ọ bụghị naanị na ụfọdụ ndị ọrụ ejirila OnePlus ha 6. Nke na-adịghị njọ ma ọlị, ọ na-enye aka igosi na ụlọ ọrụ ahụ bụ ụdị ndị a pụrụ ịdabere na ya. Karịsịa ihe nlere nke na-ere yana nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Onye OnePlus 6 ga - edozi nsogbu ihuenyo gị na nwelite ya ọzọ
Achọrọ m mkpanaka, enweghị m mobile
Zaghachi Rocio baamontes gijon
Google gaara ekpughere ụbọchị ngosi nke Pixel 3
Qin AI, Xiaomi ọhụrụ na gam akporo maka ihe dị ka euro 25